GrabaChat Na-eburu Ugwu Na-akwanye Elu na Ngwụcha Mbido | Martech Zone
Monday, April 11, 2011 Sunday, October 4, 2015 Bọọlụ Lorraine
Na Fraịdee, edere m akwụkwọ na blog banyere Mbido izu ụka. N'ime ya, atụpụtara m na ọtụtụ n'ime ndị sonyere ga-enwe ahụmịhe ndụ na-agbanwe ma eleghị anya:
Nwee ohuru oru
Nwee otu azụmahịa
Hụ na nzuzu echiche ahụ ị gbagharịrị bụrụ eziokwu
Maka ndị otu Team GrabaChat nke ahụ bụ eziokwu. Onyinye mmeri ha bụ ngwa nkata ndụ, nke ị nwere ike ịmụtakwu banyere ebe a: Grabachat . Ha amaliteworị iwepụta ụda na m na-atụ anya na anyị ga-anụkwu banyere ha, na nke ọzọ ụlọ ọrụ malitere izu ụka a
Anyị na-atụ anya ịgba ọsọ ma ọ dịkarịa ala otu ihe omume ọzọ n'afọ a. Nanị ajụjụ bụ ma ọ bụrụ na ị ga-adị njikere maka ndụ na-agbanwe ahụmahụ?
Iwu WordPress nwere ndị ọzọ, kwa
Naanị m gụrụ akụkọ dị egwu banyere ụfọdụ ndị isi nke Web 2.0 ije na-ele vidiyo ugbu a dị ka mgbasa ozi ọzọ iji merie. Bandwit ụgwọ na teknụzụ na-eme vidiyo vidiyo na nchekwa dị oke ọnụ. Obi ụtọ ịhụ Grabachat na njedebe nke a.